एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ ‘रेनी’- सनम मल्ल::Milap News
शुक्रबार अर्थात यही ८ गतेदेखि सिनेमाघरमा चलचित्र आउँदै छ, कस्तो छ तयारी ?
हो, शुक्रबार अर्थात यही ८ गतेदेखि चलचित्र ‘रेनी’ देशभरका सिनेमाघरमा आउँदै छ । एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ ‘रेनी’ । यो चलचित्रलाई लिएर हामी आशावादी छौ ।
कस्तो चलचित्र हो रेनी ?
त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित चलचित्र हो ‘रेनी’ । बिमला मल्ल र संजिव मल्लले निर्माण गरेको यो चलचित्रमा सरोज खनाल, सुरवीर पण्डित, दीपक ढकाल, गिरिश रिजाल (समीप)का साथमा मेरो मुख्य भूमिका रहको छ । गिरिश रिजाल (समीप) को निर्देशनमा बनेको चलचित्र काठमाडौ उपत्यका तथा कुलेखानीलगायतका ठाउँमा छायाँकन गरिएको छ । चलचित्र एक्शन, लभ, कमेडी जनराको छ ।
यो चलचित्र किन हेर्न जाने दर्शक ?
मैले माथि पनि भने यो चलचित्र लभ, कमेडी, एक्सनदेखि लिएर सबै मिक्स भएको एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ । म दर्शकलाई के रिक्वेष्ट गर्न चाहन्छु भने नयाँ कलाकारले गरेको कामलाई हेरिदिनुहोस् । मैले पनि जति सक्दो राम्रो गर्ने कोशिस गरेको छु । सम्पूर्ण टिमले राम्रो काम गरेका छौ । हामीले सार्वजनिक गरेका गीत, ट्रेलरलाई जसरी मनपराइदिनु भएको छ त्यसरी चलचित्रलाई पनि मन पराइदिनुहुन्छ दर्शकले भन्ने आशा गरेका छौ ।
कसरी आउँनु भयो यो चलचित्रमा ?
मेरो पहिला देखिकै रुची हो । घरमा सल्लाह गरेर । यस सम्बन्धि सम्पूर्णकुराहरु अध्ययन गरेर आएकी हुँ ।
चलचित्रको स्क्रिप्ट पनि आफैँ लेख्नुभयो ?
लेखन मेरो रुचीको विषय हो, त्यसैले यसको स्क्रिप्ट पनि आफैँ लेखे । मेरो कथा, कविता, गीत लेख्ने सानै देखिको रुचीको विषय हो त्यसैले यो चलचित्रको स्क्रिप्ट किन नलेख्ने भनेर लेखे ।
कस्तो प्रकारको भुमिका मनपर्छ ?
मलाई सबैप्रकारको भुमिका मनपर्छ । अलिकति इमोशनल प्रकारकोमा फिट हुन्छु कि जस्तो लाग्छ ।
यही ८ गतेदेखि सिनेमाघरमा आउँन लागेको चलचित्र ‘रेनी’लाई हेरेर पतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहुन सबै दर्शकहरुमा अनुरोध गर्दछु । हामीले राम्रो नेपाली चलचित्र बनाउँने कोशिस गरेका छौ, माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु ।